Xiriirrada: jacaylka ah sida isku xirka Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Relationships Jacaylka ah sida xaaraanta
Waayo-aragnimada ugu horreysa ee jacaylku badanaa waxay ka timaadaa hooyadayada, ama daryeelayaasha kale ee naga koriya markaan aad u yareyno si aan nafteena u lumino. Hooyooyinka waxay soo saaraan heerar aad u sarreeya oo ah 'oxytocin' neurochemical 'labadaba dhalida iyo naas nuujinta. Tani waxay ka caawineysaa hooyooyinka iyo dhallaanka inay isku xiraan. Hooyo oxytocin ah oo soo saarta marxaladaha hore waxay ka timaadaa qayb ka mid ah maskaxda marka la soo saaro asxaabta iyo galmada. Jacaylkaas oo ah xiriirka ka dib wuxuu taageerayaa horumarinta jacaylka galmada.
oxytocin wuxuu mas'uul ka yahay dareenka amniga, amniga iyo kalsoonida. Waxay leedahay hawlo kale, qaar ka mid ah iyaga oo aan 'yareyn', sida dareenka 'schadenfreude', ama ay ku faani karto qofkii ku fashilmay. Guud ahaan heerarka sare ee oxytocin, waxaynu ku barbaartaa. Waxay noo ogolaanaysaa inaan horumarinno qashinka neerfaha ee naga caawiya inaan la xiriirno dadka kale. Daawooyinka yaryar ee oxytocin ee aan haysano, oxytocin badan ayaan soo saarnaa.
Bal qiyaas sawir jarjar ah oo ka soo baxa adhiga iyo sida cabsida ay u noqoto. Waa hilib fudud oo loogu talagalay dadka uurka leh. Aadanuhu waa qabiil ahaan dabiiciyan. Waxaa jira tiro amaan ah. Waagii hore, qaxoonti, oo laga xaday qoyska iyo asxaabta, wuxuu ahaa mid ka mid ah ciqaabta ugu xun ee qofku heli karo. Xakamaynta kali waa isku mid.
Oxytocin wuxuu leeyahay shaqooyin kale. Waxay ka caawisaa dhimista heerarka qanjirka neurokimka cortisol. Waxa kale oo ay yarayn kartaa jahwareerka sonkorta ama walxaha kale ee walxaha leh. Tusaale ahaan way awoodi kartaa in la joojiyo qaadashada ikhtiyaarka ah ee khamriga.
Dabeecado badan ayaa sare u qaada sii deynta oxytocin ee maskaxdeena, sida: ku-daalidda maqaarka; in ay caawiyaan dadka kale; Waqti ku qaadashada dabeecadda; rinjiyeynta ama sawirka; heeso; raaxeeynta muusiga; xayawaanka xayawaanka; gacan qabashada; dhunkashada; xannaaneynta; iyo waxqabadyadu waxay jecel yihiin fikirka, yoga, ama Pilates. Waxay kobcinaysaa dareenka naxariisashada, daryeelidda, ciyaaro, iyo qadarin. Waxaan dareemeynaa ammaan ah kuwa aan garanayno oo aan aaminsanahay.
Ilaa xadkeed, maxkamad qadiim ah ayaa loo ogolaaday in ay isqabaan midba midka kale ka hor inta aan la galin xiriirka galmada. Xidhiidhka diiradda saaraya kaliya rabitaanka galmada oo keliya, ma ogolaaneyso kalsoonida, jacaylka iyo isku xirnaanta horumarka.
Lammaanaha isku Xidhka ah >>